निरंकुशता ल्याउने कि लोकतन्त्र बलियो बनाउने ?
-सुजन बञ्जारा: नेकपा एमाले र माओवादी सहितका केही कम्युनिष्ट दलले बाम पार्टी निर्माण गर्ने दीर्घकालिन योजना सहित चुनावी मैदानमा होमिएपछि यतिबेला शहर देखि गाउँसम्म विभिन्न खालका टिका टिप्पणी भइरहेका छन् । अझ निर्वाचन प्रचार–प्रसारका बेला त त्यो बहसले झन प्रशय पाएको छ । केही महिना अघि सम्म एकठाउँमा बस्नै नसक्ने नेताहरु निर्वाचनकै पूर्वसन्ध्यामा बाम एकताको घोषणा गरेर चुनावमा होमिनुलाई अझ बढी शंशयका रुपमा हेरिएको छ ।
-संजिव कार्की:.. पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आज दैवी विपत्तीको गहिरो र कहिल्यै नपुरिने घाउमा बाँचेका छन् । दैवी बज्रपातको पीडाले उनको समस्त परिवार नै मर्माहत र शोकाकुल छ । मानवीयपन, मानवीय मन भएका हरेक नेपाली प्रचण्ड र उनको परिवार प्रति विशेष संबेदनशील र शहानुभुतशिल छ । जुन हाम्रो आधारभूत र मौलिक रित हो प्रचलन हो । मृत्यु वियोगमा परेकाप्रति द्रवित हुनु, पीडाबोध गर्नु, हाम्रो सामाजिक र सांस्कृतिक अद्दीतिय पहिचान हो, परिचय हो । सांस्कृतिक दर्शन र मान्यता हो ।
लोकतन्त्रको उपहास : निर्वाचनमा परिवारवाद र नातावाद
पेशल आचार्य/ हुन त लोकतन्त्र विश्वकै विकल्पहीन राजनीतिक व्यवस्था भए पनि नेपालमा भने यसलाई परिवारवादले ऐँजेरूका रुपमा बेर्दै लगेको छ, जसले गर्दा पुराना, त्यागी, सिद्धान्तनिष्ठ औ नयाँ र पठित पुस्तामा यसको नकारात्मक प्रभाव पर्दै गएको छ ।
-हरिविनोद अधिकारी: पहिलो चरणको प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन आउनै लाग्यो तर अझैसम्म मतदाता शिक्षा गाउँमा, घरघरमा पुग्न सकेको छैन । बहाना जे जे बनाए पनि अक्षमता त निर्वाचन आयोगको नै मान्नुपर्छ । भन्न त प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका लागि बेग्लाबेग्लै मतपत्र तयार गर्नु परेकाले ढिलो भएको भनिन्छ होला तर मतदाता शिक्षा दिनलाई त नमुनामा नै दिने हो नि । अहिले प्रविधिले साह्रै सजिलो बनाएको बेला छ र स्थानीय तहमा पनि नमुना मतपत्र प्रकाशित गर्न सकिन्छ वा कम्प्युटरमार्फत पनि भिडियो देखाउन सकिन्थ्यो पक्कै ।
पेशल आचार्य/ आसन्न मंसिर १० र २१ गते दुई चरणमा हुने प्रदेश र प्रतिनिधि सभा चुनावले देश फूलफेजमा रनक्क तातेको छ । सातै प्रदेशका प्रान्तीय र केन्द्रीय निर्वाचन क्षेत्रमा चुनावी चहलपहल पछिल्लो चरणको उम्मेदवारी दर्तासँगै १२ गतेबाट ह्वात्तै बढेको छ । निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमाङ्कित खर्चले प्रदेश र प्रतिनिधि सभाका उम्मेदवारलाई चुनावमा छोपै लाग्दैन । करोडौं स्वाहा पारेर चुनाव जित्नैपर्ने बाध्यता पार्टीहरूका सामु आएको छ ।
आफ्नो अपमान गर्नेलाई जनताले बदला लिन्छन्
-हरिविनोद अधिकारी:.. संक्रमणकाल घनीभूत भएको प्रमाण हो वाम गठबन्धनमा रहेका नेकपा एमाले र नेकपा माओबादी केन्द्रको संयुक्त पत्रकार सम्मेलन र त्यसको अन्तर्यमा लुकेको धम्कीपूर्ण चेतावनी सरकारलाई, निर्वाचन आयोग र सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई । यो समीक्षा तयार पारुन्जेलसम्म नेकपा माओबादी केन्द्र सरकारमा नै छ र उसको पत्रकार सम्मलमा व्यक्त भनाइअनुसार पनि अझै सरकारलाई दिएको समर्थन यथावत छ । सरकार पनि नछोडेको अवस्था छ र सरकारका प्रत्येक निर्णयमा सहभागी पनि भएको छ ।
किन डाक्टर केसीको निष्ठाले सधै परीक्षा दिइरहनु पर्छ ?
संजिव कार्की/..प्राय सुन्दा, हेर्दा र देख्दा हठी जस्ता लाग्ने डाक्टर केसी जस्तै जोधाह, एकोहोरा र आवेगीहरुको आक्रोश र निष्ठा कै कारण यो देशमा सत् ,न्याय र धर्मको दीप धिपधिपे नै सहि आंधी हुरीबीच पनि बलिरहेकै छ । जलिरहेकै छ । यदि डाक्टर गोविन्द केसी जस्ता पागल नहुँदा हुन् त यहाँ सधै अन्धकार छाउने थियो । सँधै सधै निशाचरको साम्राज्य खडा हुनेथियो । डाक्टर केसी औंसीमा बहुलाउँछन् । पुर्नेमा बहुलाउछन र अन्याय अत्याचार र विसंगतीको विरुद्द सधैसधै बहुलाउछन ।